Kwete izvozvo kare, haugone kurova webhusaiti pasina kurova imwe yemhando yeFlash element. Zvishambiso, mitambo, uye kunyangwe mawebhusaiti ese akavakwa achishandisa Adobe Flash, asi nguva dzichienderera, uye rutsigiro rwepamutemo rwe Flash rwakazopera muna Zvita 31, 2020, nekudyidzana HTML5 zvemukati zvinokurumidza kuzvitsiva.
Izvo hazvikubatsire iwe kana iwe uchiri kutsvaga kutamba yekare Flash zvemukati, zvisinei. Mawebhusaiti asiri kugadzirisa uye zvekare midhiya asingakwanise kutakurwa anokanganikwa pasina kugona kwenzvimbo kuzvishandisa. Kunyangwe pasina Flash player muCh Chrome zvakare, heano maitiro mashoma aunogona kutamba Flash mafaira muna 2020 uye kupfuura.
Nei Ndisingakwanise Kutamba Flash Zviri MuGoogle Chrome?
Flash yave iri pane nguva yakakweretwa kubvira Apple yasarudza kusatsigira Flash pamidziyo ye-iOS kumashure muna 2010. HTML5 yakazadza iyo kusiyana, nekukurumidza uye kuchengetedzwa kwekuchengetedza, uye sekuwedzera mawebhusayithi anotora HTML5, mashoma masaiti akashandisa Flash.
Kunyange Google yakabatirira kwenguva refu kupfuura Apple, haina kukwanisa kufuratira chokwadi chekuti Flash pachayo yakasvika kumagumo ekutsigirwa kwayo kubva kuAdobe pakupera kwa 2019. Google haina kubvumidza Flash Player muChannel kutamba zviri mukati kwenguva yakati, uye nepo Chrome ichiri kugona kutamba mutambo weFlash, iyo yakavakwa-mu Flash player inofanirwa kubviswa muna 2020.
Flash yakafa zviri pamutemo, asi iwe unogona achiri kutamba yako Flash midhiya mu Chrome-ikozvino. Usacheme Flash zvakawandisa, hazvo, sezvo yainonoka, isina kugadzikana, uye isina kuvakwa nekuvhurika kwemazuva ano mupfungwa, uye ungangoda kufunga nezve kuvhiringidza Flash paPC yako zvachose kana iwe usisiri kuchishandisa.
Uchishandisa The Flash Player MuChannel Muna 2020
Chrome inovakwa-mu Flash player ichiripo, asi kwete kwenguva yakareba. The Chinangwa chekubviswa kweFlash ndiyo chinyorwa cheChirimo 87 muna Zvita 2020, asi izvi zvinogona kuuya nekukurumidza. Kana iwe ukapfuura nguva yakatarwa, iwe uchafanirwa kutarisa nekushandisa imwe yeimwe Flash player iri pazasi, sezvo iwo mairairo asingashande.
Iwe unogona kutarisa kana vhezheni yako yeFlash player mu Chrome nekunyora chrome: // components mune kero bar. Kana unazvo Adobe Flash Player akaisirwa, unogona kunge uchiri kugona kutamba Flash zvemukati, asi zvinoda kutanga zvagoneswa.
Kana iyo vhezheni yako yeCh Chrome ichine Flash player yakaiswa, iwe uchazofanirwa kuitendera kuti iite chero nguva iyo Flash Flash peji inotakura. Iwe unofanirwa kudzvanya iyo zvidzitiro icon inoonekwa pane peji iri kumhanya Flash pakupera kwako kero bar. Kubva pano, tinya Manage bhatani.
Izvi zvichaunza iyo Flash zvigadziriso menyu. Iwe unogona zvakare kuwana izvi nekutapa chrome: // zvigadziriso / zvemukati / Flash pane kero bar. Kuti ubvumidze Flash kuti ipfuure, tinya iyo Vhara masiti kubva kumhanya Flash (yakakurudzirwa) chinotsvedza. Iyo inotsvedza ichachinjira kuva bhuruu, uye sarudzo inozochinja kuva Bvunza.
Dzokera kune peji neFlash zvemukati uye mutsvare iyo. Chrome ichakubvunza kana iwe uchida kumhanya neFlash yezvinhu, saka tinya tendera kumhanya zvirimo.
Yako Flash yemukati inofanirwa kuisa otomatiki panguva ino, ichikubvumidza iwe kuti ubatane nayo. Kana zvikasadaro, kana kana rutsigiro rweCloud Flash rwadonhedzwa, iwe unofanirwa kuyedza imwe nzira.
Kutamba Old Mutambo Mitambo neBlueMaxima Flashpoint
Ne Flash yakadzima muna 2020, hauzove nesarudzo dzakawanda dzekutamba maFlash mafaera akamboita mabhurawuza makuru senge Chrome uye Firefox mira uitsigire. Imwe sarudzo, kunyanya yevatambi, ndeyokukopa nekushandisa iyo BlueMaxima's Flashpoint software.
Iyi projekti ndeye Flash player uye webhusaiti yekuchengetedza dura yakaiswa mune imwe. Unogona kudhawunirodha software wobva warishandisa kutamba mitambo inodarika zviuru makumi matatu nembiri paPC yako, hapana browser, uye yemahara.
Kuti ushandise Flashpoint, uchafanira dhawunirodha rimwe remakenduru anowanikwa Flashpoint. Sarudzo yakakurudzirwa ndeiyi Flashpoint Infinity, iyo ichakurodha mitambo sezvaunoda kuitamba, iine chete angangoita 300MB faira saizi.
Kana zvisina kudaro, iwe unofanirwa kutora pasi yakazara Flashpoint Yokupedzisira pakeji, iyo inenge 300GB muhukuru. Izvi zvine dura rese reFlash mitambo iyo Flashpoint inofanira kupa, ichitendera iwe kuti uzvitambe chero (kana kupi) kwaunoda, zvachose.
Kusimudzira Flash Online NeRuffle
Kana mitambo yekare yeFlash haisi chinhu chako, unogona kushandisa Ruffle Flash emulator kumhanya dzimwe mhando dzeFlash media zvinyorwa. Izvi zvinokutendera kuti umhanye yekare SWF Flash mafaera muPC browser rako, kutsiva Flash zvachose.
NeRuffle, hauzofaniri kunetseka pamusoro pekutsigirwa kweChipi kuti Flash idonhedzwe. Ruffle inoshandura Flash yemukati ive yazvino, yewebhu-inoshamwaridzika chimiro. Iyo haifanirwe kuvharidzirwa nebrowser yako, uye hauzodi Flash player yakavakirwa mukati kuti uzviite.
Unogona kuedza kubuda kunze nekuyedza iyo online Ruffle demo emulator, ine demo Flash mutambo kuti uyedze, pamwe nekukwanisa kuisa yako yega yeWFF mafaira kutamba uye kushandisa.
Uchishandisa Iyo Adobe Flash Player Muna 2020 & Beyond
Nepo Adobe yadonha rutsigiro rweFlash, iwe unogona kutorodha Adobe Flash Player seyakaimira sarupu kune yako PC uye Mac. Kutamba SWF Flash mafaera paPC yako pasina browser, unozofanirwa kurodha Flash Player Flashor yezvinhu debugger kubva kuAdobe.
Parizvino, unogona kudhawunirodha izvi kubva a isina kuchengetwa Adobe peji rekutsigira. Dhinda iyo Dhawunirodha iyo Flash Player projekiti yemukati debugger sarudzo yehurongwa hwako hwekushandisa, wobva wamhanya iyo faira.
Iyi vhezheni yeAdobe Flash Player inozvigutsa, saka haufanire kuiisa kuti ishandise-ingomhanya faira, wozo Adobe Flash Player hwindo faira > Vhura.
Sarudza yako SWF Flash faira mune Open bhokisi. Iwe unogona kushandisa yewebhu kero yekubatanidza, kana kudzvanya Browse kumhanyisa faira reFF kubva mukombuta yako.
Iyo inomira yeAdobe Flash Player faira inotakura uye inomhanya yeFlash yako yezvinhu, ichikubvumidza iwe kuti uenderere mberi kutamba uye kubatana neFlash mafaira kamwe Chrome uye mamwe mabhurawuza arega kuitsigira.
Kuenderera Kubva Kubva Flash
Ehe-pachine nzira dzekutamba Adobe Flash yezvinhu uchishandisa Flash player muna 2020, asi tsigiro yayo yakafa zviri pamutemo. Inguva yekufambisa kubva paFlash uye kukumbira HTML5, asi usati waita, shandisa yakavakwa-mu Flash player muChannel kunakidzwa nezvako zvekare uchinge uchinge uchinge uchinge uine mukana.
Kana iwe uri mutambi, iwe unofanirwa kudaro kurodha yekare Flash mitambo kana iwe uchida kuenderera mberi uchizvitamba zvakapfuura nguva yekupedzisira ye2020. Iwe unogona kushandisa chirongwa chakafanana neFlashpoint kuti uite izvi, kana kuti unogona kutarisa zvimwe zvacho yakanakisa online browser mitambo kutamba pachinzvimbo.
Iyi Flash Player emulator inoita kuti iwe utambe mitambo yako yekare